Sanadkii ugu nolosha xumaa ee soo maray taariikhda Adduunka - BBC News Somali
22 Maajo 2020
Image caption Sanadkii 536-kii, daruuro ayaa iftiinka qorraxda qarinayay muddo 18 bilood ah
Sida laga soo xigtay taariikh yahanka jaamacadda Harvard, ee lagu magacaabo Michael McCormick, "wuxuu waqtigaas ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa, hadduusanba ahayn sanadkii ugu xumaa ee dunida soo mara", ee lagu noolaado meelo ka mid ah caalamka.
Ceeryaamo aan la garaneynin sababta ay ku timid ayaa mugdi u baddashay Yurub, Bariga Dhexe iyo qeybo kale oo ka mid ah qaaradda Aasiya - mugdi maalin iyo habeen ah - ayaa muddo 18 bilood ah, sida uu McCormick ku qoray maqaal lagu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha seynisya.
Baraf ayaa xilliga kuleylaha ku da'ayay Shiinaha: dalagyadii beeraha way baaba'een, dadkuna aad bay u gaajoonayeen.
Xarunta taariikha wax ka qorta ee Irish-ka waxay diiwaan galisay "cunto la'aan ba'an oo jirtay intii u dhaxeysay sannadihii 536-539".
Kaddib, sanadkii 541-kii, cudur lagu magacaabay 'bubonic plague', oo ka dhashay bakteeriya ayaa ka dillaacay boortooyadii ay Roomaanka ku lahaayeen dalka Masar.
Muftigii hore ee Masar: Ahraamta midkood waa taalo Nebi loo dhisay
Image caption Sanadkii 2010-kii, folkaanadii Eyjafjallajökull ee ka qaraxday Iceland wuxuu dabkeeda ku fatahay masaafo dheer, qiiqii ka dhashayna wuxuu xiray khadka hawada ee qaaradda Yurub
Dadka taariikhda ku xeel dheer waxay muddo dheer ogaayeen in bartamihii qarnigii lixaad uu ahaa saacad mugdi ah, xilligaasoo lagu magacaabi jiray "Dark Ages" (waqtigii madoobaa ee dunida soo maray). Laakiin waxaa muddo dheer xujo noqotay in la fahmo sababta ka dambeysay daruuraha ceeryaamada keenayay.
Barafkii sameysmay xilligii guga ee sanadkii 536, ayaa laga dhex helay waxyaabo ili maqabato ah oo lagu ogaaday inay folkaano weyn ka qaraxday Iceland - ama meel ay suurtagal tahay inay ahayd Waqooyiga America - taasoo dabkeeda iyo qiiqeexada ku fidisay dhul aad u ballaaran.
Image caption Barafka wuxuu noo sheegi karaa taariikh dhacday sannado aad iyo aad u badan ka hor
Kyle Harper, oo ah taariikhyahan u kuur gala waxyaabihii dhacay waqtigaas, kuna sugan Jaamacadda Oklahoma ee ku taalla Norman, ayaa sheegay in musiibooyinka faraha badan iyo waxyaabihii ay bani'aadanka sameynayeen ay caddeymahooda ku daadanayeen barafka, taasoo "na fahansiineysa sida ay wax u dhacayeen iyo saameyntii dadka kasoo gaareysay musiibooyinkaas horseeday burburkii boqortaayadii Roomaanka iyo soo gabashadii cusbeyd ee dhaqaalaha."